Ingabe Isiza Sakho Siphansi? Isizindalwazi? | Martech Zone
ULwesine, April 24, 2008 NgoLwesithathu, Okthoba 29, 2014 Douglas Karr
Ingabe uyazi? Kuthiwani nge-database yakho? Ingabe isizinda sakho siyaxazulula? Ngabe isiza sakho namakhasi akho kuphakeme kepha kusetshenziswa amaphutha wedatha kuphela?
Empeleni besinesibonelo emasontweni ambalwa edlule lapho isiza sethu besisebenza khona ngokuphelele, kepha besingena ezinkingeni ngenombolo yokuxhumana kwedatha. Ngeshwa, sithole ngekhasimende elingajabule lisazisa. Akazange aqonde ukuthi kungani kufanele asilethe kithi - wayeqinisile!
Abangaphambi kwami ​​babenze okulungile futhi babhalisela insizakalo yokuqapha. Kwakuyinsizakalo ebiza kahle ngo- $ 49.95 ngenyanga. Lapho ngingena ngemvume, ngilahlekile ngokushesha ngizama ukuthola indlela yokuzungeza kodwa ngagcina ngithole ukuthi besixazulula ikhasi lethu lasekhaya kuphela. Besingahloli isitifiketi se-SSL, besingahloli izizinda zethu ezingaphansi, besingahloli ukuthi i-database ibiphendula noma cha.
Ngiqale ngokushesha ukufaka elinye isheke futhi ngasusa isikhathi kusuka ezikhathini zemizuzu emi-5 kuya ezikhathini zeminithi eli-1. Lapho ngichofoza ukuhambisa 'iwashi' elisha, ngashaqeka lapho ngibona ukuthi ngizokhokhiswa imali yokusetha engu- $ 99 nenye i- $ 49.95 ngenyanga. Kunjalo - imali yokusetha engu- $ 99 wento engiyisethile !!! Ngaphuma ngemvume futhi ngaqala ukufuna insiza entsha.
Ngigxume ku-Twitter (my injini yokusesha entsha) nomngani omuhle, U-Ade Olonoh of Umsebenzi Ophindayo, weza ezosiza. (Ukubhuloga okuningi - i-Ade engaphansi kwe-twitter!)
U-Ade wangikhomba I-pingdom. I-Pingdom ine-interface ehlanzekile emangalisayo enezici ezinamandla kakhulu. Ngihlelile izindlela ezimbalwa ze- API izingcingo zesicelo sethu ukuqinisekisa ukuthi i-database isebenza futhi bese ngisetha iPingdom ukudlulisa izingcingo bese ngibheka impendulo.
Le nsizakalo inengqondo futhi. Okuyisisekelo yi- $ 9.95 / mo futhi kuvumela amasheke ama-5, imilayezo ye-SMS engama-20, i-imeyili engenamkhawulo, isikhathi sokuphumula kanye nemibiko yesikhathi sokulayisha, amasheke kuya kuwo wonke umzuzu, amasheke we-HTTP, i-HTTPS, i-TCP, i-Ping ne-UDP, njll. Insizakalo yeBhizinisi ivumela amasheke angama-30 futhi Imiyalezo engama-200 yama-SMS. Futhi banamandla kakhulu API uma ungathanda ukuhlanganisa ukuqapha kwakho.
Amaseva okuphenya aseDallas, eBerkeley, e-Amsterdam, eVasteras naseFundweni. Ngizama ukuthola ukuthi ngabe Ngikuqinisekisile ngePingdom ukuthi singadlula i-SMS ngokumane sakhe uhlu lwama-imeyili lwamakheli e-imeyili omakhalekhukhwini babasebenzi bethu.
Ngibhalele nenkampani ngesicelo sesici. Kungaba kuhle uma, ngaphandle kwezexwayiso ze-imeyili neze-SMS, bevumela isicelo se-HTTP. Lokhu kuzongivumela ukuthi ngiqaphele omunye wabathengisi bethu benkampani yesi-3 obelokhu enezinkinga muva nje. Uma ngingahle ngikwazi ukuthi iPingdom yenze isicelo kuseva yami, ngingavele ngishintshe izinsizakalo zethu ziye kusipele. Lapho uhlelo selubuyile, bengingakwazi ukuthi libuyele emuva. Ngingakwenza lokhu nge-imeyili; nokho, ukubambezeleka kungasiluma.
Sisalelwe yizinsuku ezingama-29 ukuqulwa kwecala. Inqobo nje uma singaziboni izingqinamba, sizokweqa kuphakheji eyisisekelo. Lokho nje kukodwa kuzosisindisa ngemali encane futhi kusinikeze nokuqapha okuningi okuningana kwendawo!
Tags: isikhathi sokuphumulaI-pingdomijubane
I-OSX Bug: Nciphisa isithombe siye kuma-Terabyte ayi-16?
Ngo-Apr 24, i-2008 ku-11: i-12 PM
Ngimangele futhi ngamanani ezinye zezinsizakalo zokuqapha kanye nezimali ababezikhokhisa. I-Pingdom ibukeka iyisevisi enhle. Ngizinze ku-AlertBot (cishe intengo efanayo) cishe unyaka owedlule futhi ngijabule ngenkonzo yabo. Njengoba wenza konke ukusetha ngokwakho nakho konke okunye okuzenzakalelayo kusuka lapho kuqhubeke, ama- $ 50 ngenyanga kufanele athenge ibhasikidi lezinsizakalo ezingakholeki.
Ngifuna ezinye zalezi zinsizakalo zokuqapha ukufaka isikhombimsebenzisi se-Twitter sezaziso kungekudala. Kusetshenziswa i-Twitter ukuze noma iliphi inani labantu likwazi "ukulandela" izexwayiso kungaba yikhono elihle kakhulu, ngombono wami.
Ngo-Apr 25, i-2008 ku-6: 06 AM
Siyabonga ngalokho kubuyekezwa komkhiqizo uDoug. Ngicela ungazise ukuthi izinto zihamba kanjani ekupheleni kwezinsuku ezingama-30. Yilapho-ke lapho sihlela ukubeka nokuqapha kwethu.
Ngo-Apr 25, i-2008 ku-9: 24 AM
Ukubuyekeza okuhle uDoug. Futhi ufile impela ukuthi ukubheka nje isimo se-port ye-HTTP akwanele.
Besilokhu sisebenzisa iPingdom nge IFomuSpring isikhathi esingaphezu konyaka futhi bayajabula ngale nsizakalo.
Sisetha isheke elifanayo - elenziwe mayelana nokuhlolwa kwamayunithi okuyishumi nambili ngokumelene nohlelo kusetshenziswa i-API yethu (isb., Ifomu lingathunyelwa, singabona idatha elindelwe ku-database, njll.) Bese sikhipha isimo se-PASS noma se-FAIL kufayela . Ngemuva kwalokho iPingdom ihlola lelo fayela nge-HTTP ukuqinisekisa ukuthi umyalezo uthi i-PASS, uma kungenjalo izexwayiso zihamba njengobuhlanya.
Ngo-Apr 29, i-2008 ku-10: i-23 PM
Ngifuna ukwethula ezinye izinsiza ezi-2 - mahhala mon.itor.us futhi i-premium monitis imisebenzi yokuqapha. Enye yezinzuzo zabo ungahlanganisa ukuqapha kokulayishwa kwekhasi kwangaphandle nezinqubo zokuqapha izinsiza futhi waziswe ngemithombo yezinsiza eziphansi. Lapho-ke ungasebenza ngokwanele ungagcini ngokulungisa kepha uvimbele ukwehluleka. Izame!
Ngo-Apr 30, i-2008 ku-7: 57 AM
Lokho ngokuqinisekile kuyizinketho futhi empeleni ngine-akhawunti ye-mon.itor.us. Noma kunjalo, ukusetshenziswa kwePingdom njengohlelo lokusebenza kulula kakhulu. Angikwazanga ukuthola ukuthi ngingawenza kanjani amanye amasheke ngisebenzisa mon.itor.us. Kubonakala sengathi i-monitis ihlelwe ngokufanayo.